Hogganaan Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Dr. Biqilaa Hurrisaa gama isaaniitiin akka jedhanitti, qajeeltoowwan bulchiinsa gaarii irratti irra deebiin hubannoo laachuun kan barbaachise akka naannoo keenyaatti rakkoo yeroo ammaa kana kenna tajaajilaa irratti manneen hojii pabliik sarvisii sadarkaan jiran keessatti mul ... 9 Namni Hiilaarii Gooslan jedhamu tokko haasaa Kitaaba Qulqulluu irratti hundaaʼee fi waraabame erga dhaggeeffatee booda, ergaa Mootummichaa olloota isaatiin gaʼuuf torban tokkoof foonoograaficha babalʼisicha irraa ergifate. Babalʼisichi yeroo deebiʼu namoota hedduu fedhii qaban argate.
when will papa louie 4 be releasedhoard of the black dragonflighthow to make a secret handshake wikihowsubliminal talkhow to clear memory on omron blood pressure monitor bp760n
Oromiyaatti Biiroo Siiviil Sarviisii fi Buchiinsa Gaarii . Bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf akka biyyaa fi naannoo keenyatti yoo ilaalamu istaandaardiwwan (qajeeltoowwan bulchiinsa gaarii) saddeet filaatamanii bifa Paakejiitiin hojiirra oolaa turuun isaanii ni yaadatamaa. Bulchiinsi gaariin adeemsa kenniinsa murtii qaama motummaa tokkoo keessatti jalqabaa hanga dhumaatti kan calaqqisu malee ...
Dec 31, 2019 · Rakkoo bu’uura misoomaa fi addaan fageenya jiru irraan kan ka’e rakkoo tajaajila saffisaa dhiyeenyatti argachuun walqabatee gaaffii bulchiinsa gaarii yeroo dheeraaf tureef qorannoo karaa Biiroo Pablik Sarvisii Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa dhiyaate irratti bal’inaan erga mari’ateen booda godinni Baalee, godina Baalee Lixaa fi Baalee Bahaa ta’ee iddoo lamatti akka gurmaa’u sagalee ...
kan jedhu qajeeltoowwan bu’uuraa seera bulchiinsaa keessa jiran maalfaa akka ta’an beekuuf; akkasumas, sirni to’annoo qaamolee mootummaa sadaniin taasifamu (qaama seera baaftuu, seera raawwachiiftuu fi seera hiiktuu) maal akka fakkaatuu fi muuxannoowwan akka addunyaatti gama kanaan jiranis maal akka ta’e bifa agarsiisuu danda’uun ...
Feb 22, 2018 · Ka’umsarraa yoo ilaalle dugda-duubeen lagannaa kanaa maali gaaffii jedhuuf gaaffiin uummataa sirrii ta’e jiraachuun isaa wal-nama hin gaafachiisu. Kunis haala rakkoo bulchiinsa gaarii biyya kana keessa jiru irratti mufiin waan jiruuf dhiibbaa geggeessuuf akka ta’e dhugaa bakkee adii keessa jiruu dha.
Innis: 1. Bulchiinsa, Qabeenya Bishaan Dhugaatii fi Saniteeshinii 2.2.Ibsa Toora Xiyyeeffannoo . 1.Bulchiinsa, Misooma Qabeenya Bishaan Dhugaatii fi Saniteeshinii . Bishaan dhugaatii qulqulluu uumataan gahuu kan dada’amuu haalaa Aangoo fi gahee hojii keennameefin gahumsaan, qulqullinaa fi safinaan yoo rawwatee qofadha.
Amajjii 5/2012 (TOI) – Ministirri gargaaraa dhimmoota Afriikaa Ameerikaa Tibor Nagi torban kana Itiyoophiyaa akka daawwatan himame. Daawwannaan gargaaraa ministiraa kun deeggarsa Ameerikaa fi Afriikaa Bahaa gidduu jiru cimsuuf yoo ta’u, Amajjii 5 hanga 20 bara 2012 A.L.I biyyoota Afriikaa garaagaraa ni daawwatu.
Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. June 28, 2017 · Guyyaa 21/10/2009 Guyyaan Pabliik Sarvisii akka Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Sadarkaa ...
Oromia Bureau of Finance and Economic Cooperation, Finfinne. 4,275 likes · 86 talking about this. The Official Facebook page of The Regional Government of Oromia, Bureau of Finance and Economic...
Nov 18, 2019 · Gama biraan immoo, qajeeltoowwan bulchiinsa gaarii hojirra oolchuun sirna bulchiinsa gaarii fooyyeessuuf hordofiifi deeggarsi taasifame, misoomaafi ce’uumsa teknoloojii guddisuuf raawwiin jiru, dhaqqabiinsa leenjii gorsaa, barnootaafi kaayizanii fooyyessuuf raawwiin kurmaana kanaa laafaa ta’uu koreen kun gamaaggama taasise keessatti hanqina jedheeera.
Oromia Bureau of Finance and Economic Cooperation, Finfinne. 4,275 likes · 86 talking about this. The Official Facebook page of The Regional Government of Oromia, Bureau of Finance and Economic... Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 31.819 Me gusta · 245 personas están hablando de esto. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama...
Rakkoo hoji dhabdummaa dargaggootaa hundeerraa furuun jireenyi isaanii akka fooyya’u hoojjachuu, rakkoo bulchiinsa gaarii hojimaataan sirreessuu, kenniinsa tajaajilaa ammayyeessuu,caasaalee manneen murtii,abbaa alangaa,poolisii sadarkaa aanaafii gandaa irra deebiin gurmeessuu,nagayaafii tasgabbiin jiraatee olaantummaan seeraa akka mirkanaawu ...
Dubbiin akka durii miti! Yoonaas Toleeraa tiin Diinonni Oromoo waggoota dheeraadhaaf Saba Oromoo akka waan inni jibba saba biraafqabuutti olola gara garaa odeessuun Oromoof saba biraa walitti buusuun qumaara siyaasaa hamaa taphachaa turan. Yoo Oromoon baratees ta’e daldalee iddoo tokko ga’e, inni oromoo miti jedhu, yoo inni Siyaasa Oromoo keessatti iddoo guddaa ga’e ammoo innoo …
kan jedhu qajeeltoowwan bu’uuraa seera bulchiinsaa keessa jiran maalfaa akka ta’an beekuuf; akkasumas, sirni to’annoo qaamolee mootummaa sadaniin taasifamu (qaama seera baaftuu, seera raawwachiiftuu fi seera hiiktuu) maal akka fakkaatuu fi muuxannoowwan akka addunyaatti gama kanaan jiranis maal akka ta’e bifa agarsiisuu danda’uun ... Ibsa ABO Haala Yeroo Irratti .Ajjeechaan Namoota Meesha-maleeyyii,Ummata Addaa Qoodanii Tajaajila Qunnamtii Irraa Kutuun,
Caalaa: Tokkoffaa, barri torban kun kan jalqabe yeroo Yerusaalem Dh.K.D. bara 607tti balleeffamtetti taʼuu isaa yaadadhu. Waggaa sana irraa kaasnee kallattiidhaan waggaa torba yoo lakkoofne Dh.K.D. bara 600 irra geenya. Haa taʼu malee, waggaa sanatti bulchiinsa Waaqayyoo wajjin haala wal qabateen wanti adda taʼe hin raawwatamne. Home ODUU Hanqinaaleen dhiyeessii keessoo Yunivarsitii Dambi Dolloo furmaata hatattamaa barbaadu
Ibsa ABO Haala Yeroo Irratti .Ajjeechaan Namoota Meesha-maleeyyii,Ummata Addaa Qoodanii Tajaajila Qunnamtii Irraa Kutuun, Hojii hordoffii fi too'annoo kanaanis koreewwan dhaabbii Caffee Oromiyaa Godinoota 16, Aanota 32 fi Gandoota 64 tti qaamaan argamuun raawwii karoora hojii bulchiinsa gaarii walakkaa waggaa keessatti qaamoleen mootummaa raawwachuuf karoorfatan sadarkaa maal irratti akka argaman gadi-fageenyaan kan qoratu ta'a.
Hojiin qoricha biifuu kanas torban kana irraa eegalee gaggeeffamaa kan jiru ta’uu ibsaniiru. Hanga yoonaatiis hoomaa Hawaannisaa kana balleessuuf qorichi liitiriin 500 bifamuu isaa obbo Dameen dubbataniiru. Ummatni Godinichaas hoomaa kana ittisuuf ga’ee isaa ba’achaa kan jiru ta’uun himameera. Feb 22, 2018 · Ka’umsarraa yoo ilaalle dugda-duubeen lagannaa kanaa maali gaaffii jedhuuf gaaffiin uummataa sirrii ta’e jiraachuun isaa wal-nama hin gaafachiisu. Kunis haala rakkoo bulchiinsa gaarii biyya kana keessa jiru irratti mufiin waan jiruuf dhiibbaa geggeessuuf akka ta’e dhugaa bakkee adii keessa jiruu dha.
Gaafatammumaa jechuun namni yookiin qaamni tokko raawwii hojii isaatin madaalamee bu’aa gaarii yoo galmeesee sirna itti jajjeebeefamu, yeroo yakka hojjete immoo sirna ittigaafatamu jechuu dha.Waan kana ta’eef sirni iftoominaa fi gaafatamummaa qajeeltoo dimookraasii fi bulchiinsa gaarii murteesaa adda adda bahanii ilaalamanii miti. Hojiin qoricha biifuu kanas torban kana irraa eegalee gaggeeffamaa kan jiru ta’uu ibsaniiru. Hanga yoonaatiis hoomaa Hawaannisaa kana balleessuuf qorichi liitiriin 500 bifamuu isaa obbo Dameen dubbataniiru. Ummatni Godinichaas hoomaa kana ittisuuf ga’ee isaa ba’achaa kan jiru ta’uun himameera. Feb 22, 2018 · Ka’umsarraa yoo ilaalle dugda-duubeen lagannaa kanaa maali gaaffii jedhuuf gaaffiin uummataa sirrii ta’e jiraachuun isaa wal-nama hin gaafachiisu. Kunis haala rakkoo bulchiinsa gaarii biyya kana keessa jiru irratti mufiin waan jiruuf dhiibbaa geggeessuuf akka ta’e dhugaa bakkee adii keessa jiruu dha.
Naannoleen muraasa ta’anis, jechuunis Tigiraay, Amaaraa, Oromiyaa fi Saboota, Sab-lammootaa fi Uummattoota Kibbaa qajeeltoowwan kanniin ka’umsa godhachuun danbii naamusaa kan raggaasifatan yoo ta’u, sadarkaa federaalaatti garuu, sadarkaa wixinee irratti kan argamanidha. Qajeeltoowwan kunniinis kanneen armaan gadiiti. Oct 25, 2017 · Biyya heeraaﬁ seeraan bultuu keessatti olaantummaa seeraa kabajichiisuun dirqama mootummaaﬁ ummataati! Bara 23 Lakk. 19 Bitootessa 8 bara 2008 Gatiin qar. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Doorii maroo !Simaare yaa Gadaa jiituu jedhee taphataa deema.Ganda Abbaa Bokkuu tuuta isaanii bulee Korma qala.
Dec 31, 2019 · Rakkoo bu’uura misoomaa fi addaan fageenya jiru irraan kan ka’e rakkoo tajaajila saffisaa dhiyeenyatti argachuun walqabatee gaaffii bulchiinsa gaarii yeroo dheeraaf tureef qorannoo karaa Biiroo Pablik Sarvisii Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa dhiyaate irratti bal’inaan erga mari’ateen booda godinni Baalee, godina Baalee Lixaa fi Baalee Bahaa ta’ee iddoo lamatti akka gurmaa’u sagalee ... kiraasassaabdummaa ykn malaammaltummaadha.Kana irraa ka’uun rakkoo bulchiinsa gaarii akka ka’umsa barbaachisummaa karoora tarsimoo kanaatti fudhachuudhaan rakkoon bulchiinsa gaarii Manneen Murtii Oromiyaa keessatti kutannoofi hirmaannaa ol’aanaadhaan, qindoominaa fi itti fufiinsaan hojjachuudhaan dhimma hiikkamu qabu ta’ee mul’ata. IHADEG bulchiinsa gaarii cimsuuf murannoo qabaachuu isaa dubbata. Kanas rakkoon kun sirriitti jiraachuu amanuu isaa kan beeksise gumii isaa kurnaffaa irratti ibsee jira. Bu’uursitoota IWEHAT keessaa tokko obbo Abbaay Tsehaayyee gumii kana irratti ibsa kennaniin dhabamuun bulchiinsa gaarii uummaticha biratti komee hamaa dhaqqabsiisuu isaa ibsan. Nov 23, 2019 · Rakkoowwan bulchiinsa gaarii furuu, bu’uuraalee misoomaa babal’isuu, carraa hojii bal’aa uumuudhaan rakkoo hojidhabdummaa hir’isuufi rakkoolee raawwii karoora hojii bara darbee irratti mul’atan furuun dhimmoota xiyyeeffannaan irratti hojjetamaa jiran ta’uu himu. PCO leenjii torban saddetii kan Glen Waverly, Melbourne dhaabbata Police Academy kennamu fudhatuu barbaachisa. Yeroo leenjii kanatti waa’ee bulchiinsa hidhaa fi nageenya hidhamaa baratta. Leenjiin Victoria Police Academy kennamu jabaa fi naamusa kan barbaaduu dha. Qaama, Beekumsa fi sammuu kan qoruu dha. Hujii kanaaf iyyatuu koon dura wanneen ani
Utubaa Lammii Faayidaan sab-quunnamtii (mass media) madda odeeffannooti. Odeeffannoon ammoo haala ji IHADEG bulchiinsa gaarii cimsuuf murannoo qabaachuu isaa dubbata. Kanas rakkoon kun sirriitti jiraachuu amanuu isaa kan beeksise gumii isaa kurnaffaa irratti ibsee jira. Bu’uursitoota IWEHAT keessaa tokko obbo Abbaay Tsehaayyee gumii kana irratti ibsa kennaniin dhabamuun bulchiinsa gaarii uummaticha biratti komee hamaa dhaqqabsiisuu isaa ibsan.
9 Namni Hiilaarii Gooslan jedhamu tokko haasaa Kitaaba Qulqulluu irratti hundaaʼee fi waraabame erga dhaggeeffatee booda, ergaa Mootummichaa olloota isaatiin gaʼuuf torban tokkoof foonoograaficha babalʼisicha irraa ergifate. Babalʼisichi yeroo deebiʼu namoota hedduu fedhii qaban argate. Ibsa ABO Haala Yeroo Irratti .Ajjeechaan Namoota Meesha-maleeyyii,Ummata Addaa Qoodanii Tajaajila Qunnamtii Irraa Kutuun,
OMN:Oduu Sad.05,2015 Godina Booranaa Aanaa Galaanaa Magaalaa Kooreetti hojjetonni Mootummaa fi miti-Mootummaa kudha lama ta’an sababa hin beekamneen hojii irra qabamanii akka hidhamanii jiran jiraataan aanichaa tokko OMN tti himan. Namoonni kunneen turtii guyyaa lamaa booda mana murtiitti kan dhihaatan yoo ta’es poolisiin himata irratti dhihheessuu hin dandeenyee. Manni murtiis mirga wabii ... Inistiitiyuutichi dandeettii raawwachiisummaa hojjettootaa cimsuudhaaf bara 2010 kan karoorfate keessaa hubannoo hojjettootni inistiitiyuutichaa Paakeejii Meeshaalee Jijjiiramaa fi Yaade rime Bulchiinsa Gaarii irratti qaban gabbisuuf gaafa guyyaa 13/04/2010 irraa eegalee magaalaa Bishooftuutti leenjii kennee jira.
Home ODUU Hanqinaaleen dhiyeessii keessoo Yunivarsitii Dambi Dolloo furmaata hatattamaa barbaadu Ibsa ABO Haala Yeroo Irratti .Ajjeechaan Namoota Meesha-maleeyyii,Ummata Addaa Qoodanii Tajaajila Qunnamtii Irraa Kutuun, IHADEG bulchiinsa gaarii cimsuuf murannoo qabaachuu isaa dubbata. Kanas rakkoon kun sirriitti jiraachuu amanuu isaa kan beeksise gumii isaa kurnaffaa irratti ibsee jira. Bu’uursitoota IWEHAT keessaa tokko obbo Abbaay Tsehaayyee gumii kana irratti ibsa kennaniin dhabamuun bulchiinsa gaarii uummaticha biratti komee hamaa dhaqqabsiisuu isaa ibsan.
Utubaa Lammii Faayidaan sab-quunnamtii (mass media) madda odeeffannooti. Odeeffannoon ammoo haala ji Ibsa Ijjannoo Koree Giddugaleessaa DHDUO By Curated Content on February 6, 2018 KGGDhDUO jalqabbii imala haaroomsa jijjiiramaa fi kallattii eegareerratti marii fi qorannoo baldhaa guyyoota kurnan darbaniif mari’ataa ture Ammajjii 29 Bara 2010 milkaawinaan xumuree jira.